भक्तपुरमा कोरोनाको खतरा बढ्ने आसंका गर्दै आजबाट लाग्नु भयो यस्तो नियम ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/भक्तपुरमा कोरोनाको खतरा बढ्ने आसंका गर्दै आजबाट लाग्नु भयो यस्तो नियम !
भक्तपुरमा कोरोनाको खतरा बढ्ने आसंका गर्दै आजबाट लाग्नु भयो यस्तो नियम !
1,3782minutes read
रमेश गिरी – कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा पनि गाउँगाउँमा नयाँ मान्छे आउन थालेपछि विभिन्न ठाउँका नाका बन्द गरिएका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाको परोपकार शहरी स्वास्थ्थ केन्द्रबाट दधिकोट जाने मुख्य सडकमा सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको छ । सडकमा बाँसको तगारो राखेर सूचना टाँस गर्दै नयाँ मान्छेलाई प्रवेश निषेध गर्नुका साथै सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यो सडकमा दुई सातादेखि नै रोक लगाएको हो । नयाँ मान्छेको ओहोरदोहोर बढेपछि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको भन्दै स्थानीयवासीले लकडाउनका समयमा नयाँ मान्छे र जथाभावी सवारीसाधनको आवतजावत रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्थानीयवासी सुरेश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जे लामडाँडा, भुजुटोल, सुशीला भैरवका स्थानीयवासीले लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्नेको सङ्ख्या बढेको भन्दै नाका बन्द गरेको छ । एम्बुलेन्स, दमकललगायत अत्यावश्यक सवारी साधन र प्रेसबाहेक अन्य सवारी साधन चलाउन नपाइने र बाहिरका मानिसलाई गाउँमा प्रवेश निषेध गर्नेगरी बाटो बन्द गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–८ सिपाडोलको विभिन्न नाकामा स्थानीयवासीले बन्द गराएको वडाध्यक्ष किरण थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लकडाउनको व्यापक उल्लङ्घन भएको र नयाँ मान्छेको आवतजावत बढेको भन्दै स्थानीयवासीले आफ्नो गाउँटोलमा बाहिरका मानिसलाई प्रवेश निषेध गर्नुका साथै सवारी साधन बन्द गराएको बताउनुभयो ।
लकडाउनलाई कडारुपमा कार्यान्वयन गराउन वडा कार्यालयले समेत प्रत्येक टोलमा १०÷१० जनाका दरले स्वयंसेवक परिचालन गरेको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो । गुण्डुको भित्री टोल जाने सडकमा पनि तगारो हालेर बाटो बन्द गरिएको छ । सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाको धेरै टोलमा नयाँ मान्छेको प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
त्यसैगरी चाँगुनारायण नगरपालिका–९ सौडोलमा पनि बाहिरका मानिसलाई आवतजावतमा रोक लगाइएको छ । सौडोलबाट खड्का गाउँहुदै जाने सडकमा एकतर्फीरूपमा जान दिए पनि फर्कन भने नदिने गरेका छन् । सञ्चारकर्मीको टोली समाचार सङ्कलनका क्रममा पुग्दा जान दिए पनि सोही मार्ग भएर फर्कन भने नदिएको हो । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ जडीबुटीस्थित बिपी आँखा अस्पताल क्षेत्र आसपासमा काठमाडौँ र भक्तपुर जोड्ने हनुमन्ते खोलाको फलामे पुलमा स्थानीयवासीले तगारो राखेर आवतजावतमा रोक लगाएपछि यसको व्यापक विरोध भएको छ । विरोधका कारण आठ दिनपछि प्रहरीको सक्रियतामा स्थानीयवासीले उक्त तगारो हटाएर आवतजावत सहज बनाएका छन् ।
अपरिचित नयाँ मान्छेको आगमन हुँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम भएकाले स्थानीयवासीले आफ्नो गाउँ टोल छिर्ने नाकामा यसरी तगारो राखेर सडक बन्द गराई प्रवेश निषेध गरिएको छ । सिपाडोलका अंशुम कार्कीले कोरोना सङ्क्रमति एक जना नयाँ मान्छे गाउँ पसेमा सिङ्गो गाउँमा नै सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम भएकाले आफ्नो गाउँका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बाटो बन्द गराउनुपरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर नै बाटो बन्द गराएको स्थानीयवासीको दाबी छ । सरकारले लकडाउन गरेको बेलामा यसै पनि आवतजावत रोकिनुपर्ने हो तर लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै बाहिरबाट अपरिचित व्यक्तिको आवतजावत देखिन थालेपछि बाटोमा तगारो राखेर बन्द गराएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । यसले सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कार्यान्वयमा सहज बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई यसरी सडक बन्द गराउनु गैरकानूनी काम हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सडक बन्द गराएको कसैले उजुरी नदिएको जनाएको छ । सडक अवरोधले समस्या प¥यो भनेर स्थानीय तहमा पनि गुनासो आएको छैन ।
केएमसी अस्पतालको आइसोलेसनमा १ जनाको मृत्यु
मन्त्री हेलिकप्टरमा, औ’षधि खच्चडमा
रुकुम घटनाले भा बुक बनाएको, गायिका शान्ति श्री,परियारले आफ्नै अन्तरजातीय विवाहको यसरी खुलासा गरिन्
भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुग्यो, ४२९ जना संक्रमित
काठमाडौं उपत्यका सुनसान